Ogaden News Agency (ONA) – Madax ka socota ururada Koonfur Afrika oo kala qaybgalay JOKA shirkii jaaliyadda
Madax ka socota ururada Koonfur Afrika oo kala qaybgalay JOKA shirkii jaaliyadda
Posted by ONA Admin	/ January 31, 2012
(Filimkii shirkana hoos ka daawo)- Shir ay ay soo qaban qaabisay Jaaliyadda Soomaalidda Ogaadeenya Gobolka Eastern Cap, faraca ileys oo aad u heer sareeya ayaa lagu qabtay hall weyn oo ku yaala magaalada. Shirka oo uu gudominayay halgame Xassan Cabdi Nuur (Xassan Qubbi), ayaa ugu horayn lagu furay wacdi diinin ah oo uu jeediyay Ilahay ajar & xasanad ha ka siiye Sheekh Maxamed Nadiir oo ka mida culumada ugu caansan wadanka South Afrika. Sheekha ayaa ku dheeraaday in midnimada walalah islaamka ah la xoojiyo iyo faa’iidada ay leedahay ismaqalka iyo kala dambaynta isagoo sheekhu yidhi; “ Halganka Ogadeniya ka socda wuxuu u baahn yahay in loo midoobo loona istaago.
Shirka waxaa ka soo qeyb galey madax u dhalatay dalka South African oo ka kala socday ururuda SABS, ANC , SANCO. Waxaa lagu soo dhawey madaxa ANC ee magalada Eastn Londan mudane Ondala oo ah halgamaa caan ka ah South Africa, waana ragii soo qaaday qoriga. Masuulkan ayaa ku bilaabay hadladiisii ereyo qiiro leh oo xamaasadeeysan. Wuxuu ku bilaabay; “Ogadeniya VIVA .. Ogadeniya ha xoroowdo – Ogadeniya hanoolaato.”
Masuulkan oo ah nin siyaasi halgamaa ah ayaa ka dhargsanaan qadiyadda iyo xaalada Ogadeniya iyo dhibatada ka jirta wadanka. Wuxuu yidhi; “Ogadeniya xaaladda ka jirta waa mid aan cidana iiga sheekeyneynin. Waa xaalad gumaysi, waanan soo marnay” ayuu yidhi; “Xanuun keedana waan garan.”
Wuxuu ku dheeraday halgankii ANC isagoo yidhi waxaan soo marnay dagal culus. “.. Gumaysigu wuxu noogu yeedhi jiray erayo xun xun ama kolba magaca ugu liita, halka shacabku ay noo yaqaaneen xidgaha ama halyayada wadanka.”
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyey madax SANCO oo ah urur bulsheed oo isaguna yidhi; “Shacabka Somalida Ogadeniya dhibaatada haysata waa in aan laga qarsan indhaha.” Wuxuuna ku booriyey madaxdii ANC inay hawshan ka seexan kana hawl galaan maadama oy yahiin urur siyaasadeed.
Waxaa isagana lagu soo dhaweeyey Jobavo oo ah duqa magaalada oo isaguna yidhi maamul ahaan waanu idin garb taaganahay. Ururdan ka soo qeyb galay shirka ayaa ah lamo ka baxay ururka weyn ee ANC.
Sacab ayaa lagu sagootiyey madaxdii South African-ka ahayd ee shirka kala soo qaybgalay jaaliyadda.
Intaa ka dib ayaa waxaa lagu soo dhaweye gudomiyaha Jaaliyadda Somaliyeed ee Koonfur Afrika (SASA) Macalin Cabdullahi Cabdi oo bulshoweynta Soomaliyeed ugu baaqay in ay hiil & hooba siiyan halganka aan gorgortanka galayn ee Ogaadeenya ka socda isagoo sheegay in Soomaaliya oo dawlad noqota ay ku xidhantahay Ogaadeenya oo xorowda.
Gudoomiyahan oo la dhihi karo waa hogaamiye caafimad qaba ayaa warbixin dheer oo ku baxaysay luuqadaha engilshka iyo kan hawsahaba kaga waramay halganka ka socda Ogadeniya.
Waxaa dadkii shirka isugu yimid aad ugu guubaabiyay Nabad doon Daahir Carte inay ilaaliyaan wada jirka & midnimada oy marwalba u hiiliyaan shacabka dulman ee dhulkoodii lagu gumaadayo. Nabad doon Carte wuxuu dadkii madasha isugu yimid ku dhiiri galiyay in ay dadaalkooda laban laabaan kuna dhaganaadaan mabda’ooda gobanimo doonka ah. Wuxuna ka codsaday walaalaha Soomaliyeed meel ay joogaanba inay halganka ka socda Ogadenya naf iyo maalba la garb istaagaan.
Waxaa madasha hadal qiiro wadaniyadeed xanbaarsanaa ka jediyay Mudane Xassan Eelay oo ka soo jeeda gobolka Bay, wuxuuna aad u dhaliilay kaalinta ay Soomaaliweyn ka ciyaartay halganka Ogaadeenya lagu xoraynayo. Wuxuu shegay in wax laga xishoodo ay tahay kuwa dubka Soomaalidda sheeganaya ee cadawga Soomaaliyeed ka gadanaya walaalahoda. Mudane Xassan ayaa ka digay cawaaqib xumada ay leedahay shacabka Soomalaidda Ogaadeenya ee cadowag loo garbo duubayo dhiigoodana Itoobiya lagu raali galinayo.
Waxaa asaguna goobta ka hadalay Nabadoon Jacfar Diriye oo si xamasadeeysan uga hadlay xalada Ogadeniya wuxuna yidhi; “Somalida dhiibta shacabka Somaliyeed ee Ogadeniya ee Somalida gata oo ka baayac mushtara waanu ka xunahay, waxaana garab taaganahay halganka ay hormuudka u tahay jabhadda ONLF, waanuna tageeri jira kolka laga reebo in yaroo dhuuni qaatayaal ah.”
Mudane Mahamed Shariif oo ah ka mid ah masuuliinta sare ee ururka ayaa khadka telefanka soo galay waxana lagu soo dhaweeyay sacab iyo sawaxan, waxaana wada shaqadhay kuraasta hallka.
Mudane Maxamed shariif wuxuu ku bilaabay salaanta islaamika ka dibna warbixin dheer oo meela badan taabatay ayuu ka xogwaramay.Wuxuu hadalka ku bilaabay in xiliga Ogadeniya ay tahay Jiilaal laakiinse abaari kama jirto hada. Ka dib wuxuu ka xogwaramay xaaladda halganka gudaha ka socda iyo kuwa dibadda. Wuxuu kaloo ka waramay jahawareerka haysta gumaysiga oo dhamaan qorshayaalkii uu ku talagalay ay wada fashilmeen.
Dadwenihii kulanka ka qayb galay ayaa Mudane Maxamed Shafiir su’aalo waydiiyay uu dhamaan uga jawaabay si aad loogu maqsuuday oo hufan. Arimaha uu soida fiican uga xogwaramay waxaa ka mid ahaa wadahadaladii horey u soo dhex maray ONLF iyo xukuumadda Itobiya gaar ahaan ururka TPLF, isagoo hoosta ka xariiqay in mabaadiida wadahadalka ee jabhada u yahay mid marwalba u furan xukuumada Adhisababa oo ay jabhada ONLF diyaar u tahay ilaa hadana ay ka warwareegayso Itoobiy inay soo fadhiisato wadahadal dhab ah oo soo afjara dagaalada mudada dheer soo taxnaa.
Marna sameen mayso ONLF wax aan dan u ahayn qadiyadda shacabka, mana dhicayso wax ka hooseeya aay-ka-tashi dhab ah inay ogolaato jabhadda.
Shirka oo mudda dheer socday ayaa guud ahaan magalada laga dareemayey jawiga fiican ee shirka uu ku socday, waxaana la soo xidhay ganacsiga magalda ku yaalay ee Somalida iyadoo meela badan iyo meherdaha ay ka bibanayeen calanka shacabka S.Ogadenya.